Igama Lamakhemikhali: Chlorine Dioxide One ingxenye Powder.
Izici: i-chlorine dioxide Ingxenye eyodwa yePowder iyimpuphu ethuthekayo, engaqhumi yezinto eyodwa okuthi, uma seyengezwe kumthamo othile wamanzi, iphendule ngokugcwele ibe yisisombululo esisebenza isikhathi eside esisebenza i-chlorine dioxide.
Igama Lamakhemikhali: I-Chlorine Dioxide Powder Kit / chlorine dioxide izakhi ezimbili zezinto
Izici: I-chlorine dioxide izingxenye ezimbili ze-powder kit iyithuluzi lempuphu elithuthekayo, elingadubuli lezinto ezimbili okuthi, uma selingeziwe kumthamo othile wamanzi, liphendule ngokugcwele libe yisisombululo esisebenza isikhathi eside esisebenza i-chlorine dioxide.
I-Chlorine Dioxide (ClO2) AmaSachets angumkhiqizo womenzeli wokulethwa kwe-chlorine ozosetshenziswa njenge-deodorizer. Ama-powders athile afakwa kuma-sachets. Lapho ufafaza amanzi emaphaketheni, amasaka akhiqiza i-chlorine dioxide gas ukuqeda iphunga elibi nelingafuneki emthonjeni wawo ngokushesha. Kungcono ukususa izindawo zephunga nemfuneko yokususa iphunga ngokushesha. Igesi ingakhishwa ngokuphelele emahoreni angama-20 kuye kwangama-30.
Ukuhlanzisisa i-Gel iyinhlangano yokukhipha okuqinile elawulwa yi-chlorine dioxide. Kubandakanya isikhwama esisodwa sempuphu nebhodlela elikhiphayo. Mane nje ungeze impuphu emanzini ebhodleleni elikhiphayo, emizuzwini embalwa kamuva, ijeli lakheka. Ngemuva kwalokho, Iqala ukukhipha i-chlorine dioxide gas emvelweni. Ukuhlanzisisa ijeli kungasetshenziswa njengesihlanzisi somoya kanye nesiphunga phunga lokulawula iphunga nokulawulwa kwezinto eziphilayo endaweni evaliwe, njengezimoto, amafriji, amafriza, izindlu, amahhovisi, imitapo yolwazi, izindlu zangasese, amagumbi okugcina nokunye.
I-Carboxylated butyronitrile Latex yokucwilisa uchungechunge lwemikhiqizo yobisi epulasitiki ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokwenziwa kwe-latex, kufaka phakathi ukufaka amagilavu ​​e-latex ne-latex. Uchungechunge lwemikhiqizo ye-latex enamafutha, i-wear.resistant, amandla aphezulu nokunwebeka kwezimpawu. Ubuchwepheshe bokukhiqiza obucwiliswa kwe-latex obucwilisiwe buzuze ukukhiqizwa kwezimboni, kuzokwehlisa inzuzo yamanani nekhwalithi enhle yokufaka esikhundleni semikhiqizo engenisiwe. Njengoba izinto ze-latex ochungechungeni zazisa umsebenzi weqembu, ngakho-ke inamafutha, ukumelana ne-solvent, kepha futhi ne-sulfur, i-metal oxide cross-linking reaction, kepha futhi kulula ukwenza ifilimu, iTuomo, nezinye izici.
Usayizi: izinhlobo ezahlukene zobukhulu nobukhulu
Ukusetshenziswa: ukuhlolwa komlilo, ukuncibilika kwegolide, ukuhlolwa kwensimbi okuyigugu
Izinto: I-Alumina Ceramic, i-Alumina Ceramic, Ubumba
Usayizi: 20g / 30g / 40g / 45g / 50g / 55g / 65g / 75g